Gerrard: Uma maleynaayo inaan ahay halyeey England ah. - Caasimada Online
Home Warar Gerrard: Uma maleynaayo inaan ahay halyeey England ah.
Gerrard: Uma maleynaayo inaan ahay halyeey England ah.
Kabtanka kooxda Liverpool Steven Gerrard ayaa diiday fikrad ah inuu yahay halyeey xulka England ah, isagoo caawa Three Lions u safanaya kulankiisii 100aad, xilli ay kulan saaxiibtinimo la ciyaarayaan xulka Sweden.
“Kubada cagta dhexdeeda marka aad joogto in laguugu waco geesi ama Halyeey ma ahan wax akteyda ka fudud, England waxaa jira 11 halyeey, inta soo hartayna waxba ma ahan aniga ahaan,” ayuu u sheegay Daily Mirror, isagoo markaasi ula jeeday ciyaartoydii xulka u qaaday koobkii aduunka 1966dii.
“Mar walba oo u ciyaarayo England waxaan isku dayaa inaan u ciyaaro sida ugu fiican waxaana mar kasta siiyaa wax walba oo karaankeyga ah.”